Apple inoburitsa macOS Yakakwira Sierra 10.3.3 ine gadziriso yekugadzirisa iyo Telugu bug | Ndinobva mac
Vhiki rapfuura chete bug mune ino system yakaburitswa mune ese Apple akasarudzika midhiya MacOS Yakakwira Sierra, watchOS, uye iOS, iyo yakaunzwa nekunyorwa kwechiratidzo muTelugu. Izvi zvakakonzera kuti komputa itangezve kana meseji yakavhurwa uye neiyi gadziriso Apple inofunga kuti nyaya yagadziriswa.
Chaizvoizvo mushanduro dze beta dzinotevera dzaive nevagadziri mumaoko avo, dambudziko rakanga ratogadziriswa asi iko zvino Cupertino firm inotangisa diki diki mukati macOS Yakakwira Sierra 10.3.3 yevashandisi vese uye kugadzirisa dambudziko.
Apple inogara ichiteerera kukundikana kwesystem uye inoratidzwa pane dzese nguva idzo bhagi inoonekwa iyo inokanganisa mashandiro ehurongwa, inomiririra dambudziko chairo mukushanda chaiko kwemidziyo, kunyangwe mune ino kesi vashandisi vazhinji uye havana kuziva nezvedambudziko iri kana zvisiri vezvenhau. Chokwadi chiri pachena ndechekuti ivo vaiziva nezvedambudziko uye vakarigadzirisa nekukurumidza.
Pamberi, zvakadaro, vamwe vashandisi vakavhiringidzwa ne "kutenda" kwevamwe vakaburitsa chiratidzo icho chakakonzera kushanda kutangazve. Mukutumira mameseji, ingave iri yepamutemo Apple, WhatsApp uye kunyange mamwe mashandisiro, kutadza uku kwakagadzirwa zvakare. Ikozvino neshanduro nyowani yakaburitswa kune ese masisitimu anoshanda: iOS 11.2.6, wachiOSOS 4.2.3 uye tvOS 11.2.6 Apple inogadzirisa dambudziko, vanotikurudzirawo kuti tivandudze nekukurumidza sezvazvinogona, saka usamirira kwenguva refu kuti uzviite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Apple inoburitsa macOS Yakakwira Sierra 10.3.3 ine gadziriso yekugadzirisa iyo bug bug
Apple inogona kunge yakagadzirisa dambudziko rePeoplePod rekudengenyeka